Maitiro Ekuzvidzivirira Iwe pachako muWiricheya
Maitiro Ekuzvidzivirira Iwe pachako muWiricheya.
Posted on November 7, 2018 November 20, 2020 by csr 1687
Vanhu mukati mavhiripu inogona kusangana nematambudziko mazhinji zuva nezuva. hwiricheya vashandisi kazhinji ndizvo zvinangwa zvekurwiswa sezvo vasingakwanise kukurumidza kutiza mamiriro akakurumidza kukwana. Kuva wiricheya mushandisi hazvireve kuti iwe unofanirwa kutya. Pazasi pane mamwe matipi ekuzvidzivirira uye zvinongedzo zvinobatsira kuti uzvidzivirire mumamiriro ezvinhu ane njodzi.
It yakakosha kugadzirira kuzvidzivirira kubva pakurwisa kunogona kuitika. Munhu mu wiricheya inogona kuve iri nyore kunangwa kune vanorwisa. Iva nehanya nenzvimbo dzako uye dzidza nzira dzekuzvidzivirira.
Shandisa yako wiricheya sechombo
Your wiricheya inogona kushandiswa panguva yekurwiswa. Rova anorova shins ne wiricheya nekusundira chigaro kumberi. Izvi zvinogona kukonzera akarwiswa akasendamira kumberi kana kudonhedza kusvika pameso eziso achikupa iwe mukana wekuzvirova mumhino.
Shandisa yako wiricheya kuti zvikubatsire. Shandisa nzvimbo dzako dzekuona nekuvavarira mabvi eanorwisa neruoko rwako kana chinhu. Kurwisa nzvimbo yekugomera uye yeuka kuvharira kukaka.
Cherechedza: Zvidzivirire kubva pakubata ruoko. Rangarira maoko ako. Usarega murwisi achibaya maoko ako. Zvichengetedze padyo nemuviri wako kana mukati mezvigaro zvemaoko.
Nyoresa mukirasi yekuzvidzivirira
Kune akawanda ekuzvidzivirira makosi anowanikwa vanoshandisa wiricheya. Semuenzaniso, kune misiyano yakasiyana yekarati kosi yakarongedzerwa avo vari mavhiripu.
Kuchengeta mhiripiri newe inzira yakanaka yekuzvidzivirira panguva yekurwiswa. Mhiripiri pfapfaidzo iri yakaderera mutengo uye inogona kutenga nyore nyore. Iwo madiki uye anogona kutakurwa muhomwe yako kana bhegi.
Chinangwa chepiritsi chakanangana nechiso, kunyanya maziso. Izvi zvinosiya murwadzi akapofomadzwa zvinorwadza kwemaminetsi makumi mana nemashanu achikupa mukana wekutiza.
Inzwi Personal Alarm
Alarm diki yemunhu inoshandisa sairini ine ruzha iyo inogona kutyisidzira munhu ari kurwisa nekukwevera padhuze kutarisisa.
Dzidza zvakawanda nezve maalarm epamoyo pano: https://www.karmanhealthcare.com/blog/2017/08/03/personal-alarm/
Shandisa pfuti yakasimba
Stun pfuti hazvisi zvinouraya zvemunhu kudzivirira zvishandiso zvinounza kuvhundutsa kune anorwisa uye nekuzvidzivirira kwenguva pfupi. Nekudaro, ita chokwadi chekubvunza nemitemo yeguta rako usati watenga stun pfuti.
5 Kuzvidzivirira Matipi: https://www.karmanhealthcare.com/5-self-defense-tips-for-wheelchair-users/
Chii chiri chinangwa chewiricheya?